Na Mmetụta na Akpaaka | Martech Zone
Na Mmetụta na akpaaka
Sunday, July 9, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Na-akpali mmasị otu isi na Mkparịta ụka gba ọtọ, M kpebiri na m rebrand m blog taa. Nanị ihe m kpọrọ ya Douglas A. Karr, ahịa dijitalụ na nchekwa data. Nke ahụ ekwupụtaghị ọtụtụ ihe banyere onye m bụ na ihe m na-achọ ime site na blọọgụ m. Ọ bụrụ na mmadụ pịnye n'ime Nri 'Ahịa akpaaka', ejiri m n'aka na agaraghị ebe ọ bụla na listi - ọ bụ ezie na ọ bụ agụụ nke m.
Agbalịrị m nanị iji otu ahịrịokwu jidere mana enweghị m ike ịchọta ya. Mgbe ogologo oge nke thesaurus na akwụkwọ ọkọwa okwu atule, M kpebiri na e nwere 2 okwu na n'ezie summed ya… mmetụta na akpaaka. Nkwenkwe m bụ na ahịa dị irè na-agbadata na usoro 2 a. Ikike ịre ahịa nke ọma kwesịrị imetụta mmadụ ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-ere. Akpaaka bụ ihe ga-aga n'ihu na usoro a ruo oge zuru ezu.
N'ịrụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, ozi ziri ezi, akwụkwọ akụkọ, telemarketing, web, blog na ozi ịre ahịa email, ọ na-abụkarị maka ijigide mkparịta ụka gị na onye ahụ. Kpatụ mgbasa ozi n'ihu ha ma chefuo ha, ị na-ebelata ohere ị nwere imechi ọrịre ahụ. Ikwesiri ịnọgidesi ike, ma na-akwanyere mkpa ma ọ bụ ọchịchọ onye ahụ ùgwù.
Afọ iri abụọ gara aga, obere oge tupu m banye n’ thetù Ndị Agha Mmiri, arụrụ m ọrụ na Depot Home. Ọ bụ ọrụ siri ike. Abụ m 'nwa nwoke', na-ebugharị ụgbọ ala na ụgbọala na ndị ahịa na Phoenix, Arizona. Mana agaghi m echefu nkuzi izizi m na ahia n’ebe ahu. Ndị njikwa ahụ gbara ndị ọrụ niile ume ka ha jụọ ndị ahịa ọrụ ha na-arụ. Nke a dị iche karịa ịjụ, “Enwere m ike inyere gị aka?”. Na nke ahụ, azịza dị mfe nwere ike ịbụ "Mba". Agbanyeghị, mgbe a jụrụ ha ụdị ọrụ ha na-arụ, ọtụtụ ndị ahịa bidoro mkparịta ụka dị ukwuu na ndị ọrụ ahụ gbasara ihe ha na-achọ ime. Nke a dugara ndị ahịa nwere obi ụtọ ma na-emechi ahịa.
Site na ndị na-ajụ ase dị ka weebụ, ọ ka bụ mkparịta ụka anyị na-anwa ibido na ndị ahịa anyị. Tingdebe saịtị weebụ na ebe ahụ na ihe osise dị jụụ dị ka ịnwe akara ngosi mara mma na mpụga ụlọ ahịa gị. Ma ọ gaghị ewere ọnọdụ mmachi okwukwe na nnabata.
Modelsdị mgbasa ozi na-emetụta mmekọrịta ka na-adịgide. Nọgide na mgbasa ozi ebe niile ma mmadụ nwere ike ịhụ otu wee zụta ihe. Agbanyeghị, ịntanetị na-eweta nnukwu ndị na-ajụ ase maka iji mkparịta ụka gị na atụmanya gị na ndị ahịa gị na-akparịta ụka. Blọọgụ, RSS, Email, msdị, Mkparịta ụka Weebụ, na ọchụchọ bụ mbọ ahịa mmekọrịta. Ka ị na - ejikọtakwu ma tinye ihe ndị a n’ahịa azụmaahịa gị, mkparịta ụka dị n’etiti gị na atụmanya gị ka mma, ọ ka mma ka azụmahịa gị baa ọgaranya.
Ihe niile gbasara ikike na akpaaka. Enwere m olileanya na ị masịrị aha ọhụrụ ahụ!
Tags: akpaakadouglas karrmmetụtana mmetụta na auotmationrobert scobleShel Israel
Ihe mere ụlọ ọrụ ihe nkiri ji daa, ihe na-aga n'ihu